June 21, 2018 | Kichuu
Simannaa Goota injiinar Masfin Abbabaa(ROOSOO)fi hiriiroota isaa wajjin magaalaa #Fincaa’aatti Itti muddii!
Jaarmayoonni Oromoo Lama Biyyatti Deebi’uuf Ka Jiran Ta’u Beeksiisan. Warri Biyya Seene Moo Maal Jedhu?
Jaarmayoonni Oromoo Lama Biyyatti Deebi’uuf Ka Jiran Ta’u Beeksiisan. Warri Biyya Seene Moo Maal Jedhu? WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)——Jaarmayaan ABO takkomee fi Addi Tokkummaa Walabummaa Oromiyaa(ADWO) dhiyeenyatti biyyatti galuuf ka jiran ta’u beeksiisan. Mummichi ministeera [Read More]
Shumat Iddoosaa : HORA FINFINNEE NEW Oromo Music 2018 By Raya Studio
Shumat Iddoosaa : HORA FINFINNEE *** NEW Oromo Music 2018 *** By Raya Studio Sayyoo Mokonnin: Baroode ** NEW 2018 Oromo Music HAMARSAN D/TOLASAA “Abbaa Torbee ” new Oromo music video 2018
Buraayyuu-Waarshaa Kophee Koongoof Lastikii Buraayyuu Gubachaa jira.
#Burraayyuu yeroo ammaa kana warshaan koongoo gubaachaa jira! Namoonni achi keessa hojjaatan balaa ibiiddichaan miidhamaniiru. Kaaneen keessaa muraasni kunooti. Akkuma suura irra mullatutti Balaan Warshaa sefiitii hin qabnee kana fakkaata. ﻿
Engineer Mesfin har’a bakka dhalootaaf awwaalcha jaala qabsoo isaa Gooticha Engineer Tesfahun Camadaa daawwate.
Daawud Ibsaa: Bakka qaamni sadaffaan jirutti mootummaa waliin mari’achuuf qophiidha Haalli siyaasaa Itoophiyaa keessaa bifa ammaatiin yoo ittii fufeefi haqa qabeessa ta’e, gara biyyaatti galuun karaa nagaatiin qabsaa’uu barbaanna jedhu hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo [Read More]
Jimma goota ishee mana hidhaa akkasitti simatte Ilaalaa! Akka waan hiriirri gaafa Sambataatti waamame Tigroota haleeluuf xiyyeeffateetti dhaamsa walii dabarsaa jiru rogeeyyiin jaraa gariin. Barruun kun akkas jedha. “Tigroonni Tigraayiin ala jirtan gaafa Sambataa guyyaa [Read More]
Simannaa-Qeerroon Najjoo, Masfiin Ittaanaa yeroo simatan. Masfin hiriyaa isaa Masfin Moosisaa wayyaaneen Qaallittiitti ajjeeste. Ofii isaatii waggaa 17 booda hiikame. #ቄሮ _ቡራዪ #የአባገዳልጆች ሁሌም እንዳኮራቹን ነው።